နှင်းဟေမာ: ကြယ်ပွင့်ကလေးများမချစ်ဝံ့ပြီ ...
ကျမဘ၀မှာ မှတ်မှတ်ရရဆိုသလို... အမြဲညည်းဆိုနေကျ တေးသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ပြန်ရှာရင်း ဘလော့လေးမှာ တေးသီချင်းလက်ဆောင်တစ်ပုဒ်အဖြစ် ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ် ...။
ဒီသီချင်းလေးက ကျမ အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သော တေးသံရှင်ဟေမာနေ၀င်း ရဲ့ တေးသီချင်းတွေထဲက ကျမ သိပ်ကို နှစ်သက်ခဲ့သော သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်လဲဖြစ်ပါတယ် ... ။
ကျမ တို့ရဲ့ ဘ၀သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ မွေးဖွားချိန်ကနေ သေဆုံးချိန်အထိ အခါအခွင့်သင့်တိုင်း ဂီတအနုပညာကို ထိတွေ့ခံစားလေ့ရှိကြသလို ... ဘယ်လူမျိုး ဘယ်ဘာသာတရားက လူတွေကို ကြည့်ကြည့် ၀မ်းနည်းမှု ၊ ၀မ်းသာမှု ၊ သာယာကြည်နူးမှု အစရှိတဲ့ ခံစားမှုတွေကို မိမိတို့ရဲ့ ဘာသာဂီတအနုပညာရပ်တွေနဲ့အတူ ရေးဖွဲ့ သီကျူး ခံစားလေ့ရှိကြပါတယ်...။
အလွန်တစ်ရာမှ ကျယ်ဝန်းပြီး အဆုံးအစမရှိသော မိုးကောင်းကင်ကြီးနဲ့တူတဲ့ ဂီတအနုပညာကို လူသားတိုင်း နှစ်သက်မြတ်နိုးတတ်ကြသလို ဒီသီချင်းလေးကိုလည်း နှစ်သက်ကြမယ်လို့ ကျမ ယုံကြည်မိပါတယ်...။
အားလုံးကို ချစ်ခင်လေးစားလျှက် ...
(13 Oct 2010 , 12:33 AM )
Posted by မင်္ဂလာပါ .... at 12:30 AM
သီချင်းက ကောင်းတယ်နော် အညာအလိုက်လေး ...း)
ငြိမ့်ငြိမ့်အေးအေးလေးနဲ့ နားထောင်လုိ့ကောင်းတယ်။ ကျနော်လဲ ခံစားလို့ရပါတယ်။
နှင်းရေ သီချင်းလေးကောင်းလို့ လာနားထောင်တာပါ
ဒီလိုသီချင်းလေးတွေ နားမထောင်ရတာတောင် ကြာနေပြီ။
သီချင်းလေးက အေးအေးလေးမို့ ကြိုက်နှစ်သက်မိပါတယ်..
နားထောင်သွားတယ် ညီမလေး။ သီချင်းရဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ညီမလေးရဲ့ အေးအေးနေတတ်ပုံက လိုက်ဖက်ပါ့။
ကိုယ်တိုင် လာရောက်အားပေးသွားလို့ အစ်မ နေကောင်းသွားပါပြီး)
သီချင်းလေးကို ဟိုနေ့ကတဲက လာနားထောင်သွားပြီးပြီ။ အဲ့တုန်းက ခြေရာ မချန်နိုင်ခဲ့လို့ ခွင့်လွှတ်နော်။
အမရေ သီချင်းနားထောင်သွားတယ် ဒါပထမဆုံးအကြိမ်နားထောင်ဘူးတာ။
ကျောက်ပန်းတောင်းဆိုဒ် အတွက် ပုပ္ပါးအကြောင်း ရှာရင်ေ၇ာက်ပါတယ်ခင်ဗျာ. တွေ့ရတာ တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်.. စာတွေလဲ ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်.. အေးဆေးမှ လာဖတ်ဦးမယ်. တောင်းဆိုစရာ တခုရှိတယ်.. sanwin26new@gmail.com ကို အပ်ပေးပါနော်.
မရောက်တာကြာလို့ ဆောရီးပါနော်။ ကွန်နက်ကသိပ်မကောင်းတတ်လို့ပါ..
ညီမရေ အလည်လာ သီချင်းလေးနားထောင် စာတွေလာဖတ်သွားပါတယ်။
ဆမ်ဘာဝမ်းတန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ( 2010) ကိုစင်္ကာပူနို...